Olee otú mbubata mpg ka iMovie?
Otu nke kasị mma nwetara nke Apple Inc. na mmekọrita nkiri edezi bụ iMovie na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na usoro ihe omume e ebudatara ọtụtụ ugboro dị nnọọ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ala nke nkà results na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma nbudata omume na nke a na-eji iji jide n'aka na ọ bụrụ na a ụfọdụ format na-adịghị ebudatara mgbe ahụ, ọ na converted na kwajuru ka iMovie. A nkuzi bụ ihe niile banyere ihe nke mpg faịlụ ka iMovie na enyemaka nke ndị kasị mma convertor nke ahịa.
Nkebi nke 1: Apple iMovie na-agaghị emeli
Part 2: Olee mbubata mpg ka iMovie on Mac
Nkebi nke 3: Gịnị mere ọ bụla mpg video faịlụ-apụghị dị ka iMovie?
E nwere ọtụtụ iri puku formats na-akwado site na iMovie na maka otu ihe ahụ ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ọkaibe omume iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ọgwụgwọ na mkpokọta nke na mmekọrita na format mbubata mgbe chere ihu ma ka e nwere ụfọdụ formats dị ka doro onye a na-apụghị dị na a na-ahuta ka otu n'ime ndị kasị agbawa obi atụmatụ na-arụgide a onye ọrụ iwepụ usoro ihe omume ọbụna ma ọ bụrụ na Ịzụ e mewo ka. -Esonụ bụ ụfọdụ ndị ọzọ na-agaghị emeli nke usoro ihe omume na-eme ka n'aka na onye ọrụ na-akawanye pụọ na ha ọ na-gwara-agụ nke a nkuzi ruo ọgwụgwụ:
Otu usoro a chọrọ oge niile iji jide n'aka na oru ngo na iMovie na dechara na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma.
Ọ bụ a ije mwute omume na ya mere ọ na-achọ dum ịta nke onye ọrụ mgbe a nkiri a na-dezie.
The mmụta nke usoro ihe omume virus a oké ịma aka onye ọrụ na onye mere na ọ dịghị mfe na niile iji jide n'aka na ihe omume ahụ mụtara ya isi.
The ogologo iMovie oru ngo na-otutu oge iji nweta bupu ya mere ọ pụtakwara na usoro ihe omume ike ga-eji ihe ọ bụla ọzọ ọrụ na nke a.
The iMovie bụ usoro ihe omume na e mepụtara maka ndị na-tech savvy otú ahụ novice ọrụ nwere ike iji ya na-enweghị nduzi kwesịrị ekwesị.
Wondershare Video Convertor Ultimate bụ ihe kasị mma na ndị kasị elu omume ndị pụrụ ime ka n'aka na mpg converted na iMovie enyi na enyi format na mgbe ahụ ibubata e mere na ala na afọ ojuju. Esonụ bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ nke usoro ihe omume nke ga-agwa ndị ọrụ na-esi jiri ya na-ndị kasị dị irè na oru oma ụzọ iji hụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe mee mgbe ọ na-abịa akakabarede na ndị ọzọ yiri usoro:
Akakabarede ọnụego bụ 30X ngwa ngwa karịa ndị ọzọ convertors na dị n'ahịa.
The DLNA nkwado e wuru na nke a bụ otu n'ime atụmatụ na-adịghị ugbu a na ihe ọ bụla ọzọ omume na nke a.
The media center wuru na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe gụgharia nke ka usoro mgbasa ozi TV ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ngwaọrụ na nke a.
The convertor na-akwado ndị ọhụrụ 4K na HD 2.0 nkwado na nke kacha mma n'ụzọ.
Usoro ihe omume na-akwado n'elu 150 formats nke na-eme ka o kwe onye ọrụ na-fọrọ nke nta tọghata ọ bụla na usoro iji ihe ọ bụla ọzọ na nke a.
The n'ozuzu mmemme interface nke usoro ihe omume bụ ihe kasị mma na ọ na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma pụta na nke a.
Olee otú ime ya?
Iji mee ka n'aka na mpg format converted ka iMovie dakọtara format ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị na-esonụ usoro a soro na nzọụkwụ na-kwuru na-na-etinyere na n'otu ụzọ ahụ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na nke a nke ga-eduga onye ọrụ iji jide n'aka na ihe omume na a na-eji bụ ihe kasị mma na ihe niile oge mmasị na nke a:
Nzọụkwụ 1: Mgbe nbudata na na na wụnye Wondershare Video Converter Ultimate, malite ngwa si ​​na desktọpụ gị na-eche maka ihe ọ bụla ruru mmelite na-arụnyere iji jide n'aka na software na-agba rụọ ọrụ nke ọma enweghị ihe ọ bụla chinchi na lags.
Nzọụkwụ 2: The tinye faịlụ button bụ mgbe ahụ na-enwe na-eme ka n'aka na mpg format faịlụ a dị ka usoro ihe omume n'ihu n'ihu:
Nzọụkwụ 3: The iMovie dakọtara format a na-ahụ na-ahọrọ iji jide n'aka na faịlụ a converted na ike ga-dị ka iMovie na ala dị ka ọ ga-ekwe ka iMovie ịchọpụta faịlụ na bụ undetectable tupu nke a akakabarede wee ebe:
Nzọụkwụ 4: The tọghatara button bụ mgbe ahụ na-enwe iji jide n'aka na faịlụ a converted na a na-emekwa ka n'aka na usoro nke metụtara ndị convertor na-okokụre ozugbo na ihe niile:
Nzọụkwụ 5: Iji iMovie onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na ụzọ na-agbaso bụ faịlụ> Bubata iji jide n'aka na faịlụ a dị na e converted na nke a kwa okokụre usoro na zuru:
Ọ bụ-ahụ kwuru na iMovie akwado niile faịlụ na-mpg na Ya mere onye ọrụ nwere ike ijide n'aka na ihe bụ nsogbu mgbe chere ihu na nke a. Otú ọ dị ya bụkwa na-ahụ kwuru na iMovie Mbubata naanị ndị mpg faịlụ na-itinye na koodu na MPEG4 / AAC ka encoder ma ọ bụ akpa. Ọ bụrụ na ndị kwuru okwu akpa na-adịghị mee na nke a mgbe ahụ, ọ bụ na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na nsogbu ga-ihu na nke ga-agaghị kpebiri. Otú ọ dị iji mee ka n'aka na nsogbu ahụ na-mgbe chere ihu na nke a ọ na-gwara iji jide n'aka na faịlụ a converted dị ka ọ na e gosiri na usoro nke e kwuru n'elu.
Olee otú ime iMovie Green ihuenyo on Mac / iPhone / iPad
> Resource> iMovie> Olee mbubata mpg ka iMovie?